[Wednesday, October 4th, 17] :: Bakool oo laga mamnuucay ka ganacsiga iyo cunista Khaadka
Xudur (RH) Maamulka gobalka Bakool ee koonfurta Soomaaliya, ayaa maanta oo Arbaca ah sheegay in la mamnuucay ka ganacsiga iyo cunista Khaadka, iyagoo sheegay in uu dhibaato ku keenay howgallada ciidamada dowladda ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Guddoomiyaha gobalka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in go’aan lagu gaaray wixii maanta ka dambeeya in la mamnuucay ka ganacsiga iyo cunista Khaadka, wuxuu sheegay in go’aankan uu soo baxay kaddib markii ay kulmeen madaxda gobalka, degmooyinka, odayaasha, cuqaasha, saraakiisha ciidamada, dhallinyarada iyo haweenka kuwaasoo ka aragti dhiibtay dhibaatada Khaadka uu ku hayo bulshada gobalka Bakool.
“Shirkii labada maalin aan yeelanay waxaa go’aan la isku raacay in degmada Xudur iyo guud ahaan gobalka Bakool wax faa’ido ah ugu jirin Khaadka, waxaa loo sheegay dadkii ka ganacsanayey Khaadka in ay mashruuc kale sameestaan maadama mashriicyo badan ay jiraan”ayuu yiri.
Guddoomiyaha gobalka Bakool ayaa sidoo kale sheegay in Khaadka uu dhibaato ku keenay howlgaladii ciidamada dowladda ay ka fulinayeen gobalka ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab
Xarrunta degmada Bakool ee Xudur waxaa maalin kasta tagi jirtay ugu yaraan hal diyaarad oo sidda Khaadka loo yaqaanno Miirowga ee ka baxa Kenya.
Gobalka Bakool ayaa noqonaya gobalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah looga mamnuuco ka ganacsiga iyo cunista Khaadka marka laga hadlayo goballada ay dowladda gacanta ku heyso.
posted on Wednesday, October 4th, 17